Usuku My Pet » Guide Instant Checkmate Ukuze kube lula Fake Online Daters
by Logan Nokucindezeleka
Ngezinye izikhathi uqamba ethemba nje ukunakwa. Ngezinye izikhathi uqamba izintatheli bezama ukwenza iphuzu. Futhi ngezinye izikhathi bafuna esibhekene nawe. Whatever ugqozi lwabo kuba, a isinqamu eliphawulekayo online ukuphola profile kukhona elinegazi ephelele - amaphrofayli eqanjiwe eziklanyelwe dupe qotho daters online. Futhi uma ungenayo unake out, ungase ube isisulu olandelayo.
Lo mkhuba shady, babiza ngokuthi catfishing, imali isikhathi kuchitha zabantu futhi usuku nosuku. Nakuba iningi labantu daters inthanethi abantu ezimangalisayo, kukhona amaqanda ambalwa ezimbi laphaya. Ngenhlanhla, scammers online bavame ukuba akufanele babe imimese sharpest in the ekhabetheni, kanjalo ngokuvamile ukwenza amaphutha elula ukuthi enika off Iqhinga yabo. Uma ufuna ukuqinisekisa ukuthi usuku lwakho esilandelayo the deal real, gcina la amathiphu alula engqondweni ohambweni lwakho online sengqondo romance.
1) Gijimani A Reverse Image Search
A-akhawunti fake futhi kusho izithombe fake. Uma abaphangi online ukwakha fake profile online, bona uzoba ngokuvamile ngiyothatha izithombe abazithola off the Internet. Ngokuqondile, the ones ukuthi uthole emva kokuba Google "guy hot" noma "intombazane hot." Bazokusiza ulayishe ngisho headshots kusukela kwezokumodela sites ukwenza profile abo njengoba oluhehayo ngangokunokwenzeka. Ungakhohliswa. An indlela kulula ukubona uma picture yabo online impinda iwukuba egijima a reverse search image Google. Uma picture yabo iphrofayela kokunamekwa wonke Internet, noma uma picture kusobala yomunye umuntu, uyokwazi unethalente catfisher ezandleni zakho.
2) Bheka For esabekayo English
Uma profile wabo ubenzela avele like bazalelwa futhi wakhulela uthi, kodwa lolimi lwabo kuzwakala umuntu nje ukufunda ulimi, ukuthi a red flag omkhulu. Online dating scammers njalo phesheya. Bayoba bathi uku njengoba American njengoba eNtabeni Rushmore, kodwa empeleni bamane bathi ukuze athathe imali American. Uma paramour yakho online lihlale likwenza sipelingi kanye neluhlelo lwelulwimi amaphutha ngeke fly in a 3rd grade ekilasini, kungase kusho ukuthi uku scammer angaphandle.
3) Ingabe An Online Background Hlola
Amarekhodi Public ayatholakala kuwo wonke umuntu ofuna ukubabona. Ngakho uma umuntu nawe online wazalelwa United States, kufanele babe ifayela emibhalweni yomphakathi. Ukucinga Igama yabo, kanye isimo sabo, in an online emibhalweni yomphakathi search. Uma lutho kufika, lokho kuwuphawu lokuthi abaza- ukwethembeka ngokuphelele nawe.
4) Watch Out For Operators Fast
Uma umuntu online efuna angene "Ukunazi" uhambe ngqo "soulmates ukuphila" qophelo lobuhlobo, kungase kube ngoba uku a romantic inkanuko. Kungase kube ngoba onentshisekelo more esikhwameni sakho kunenhliziyo yakho. Njengoba scammers online ushukumiseleka ukuze uthole imizwa yakho ngokushesha ngangokunokwenzeka, bazophatheka ukuhambisa super fast. Ngokumdlinzekela fast. Uma ubhekene wabanjwa ngalesosiwengu romance online, thatha yesibili ukubambezela futhi isheke kabili ukuthi konke abakushoyo kuyiqiniso.
5) Bheka Uma befuna Chat Online kuphela
Ingabe 100% zokuxhumana ezenziwe nge-imeyili nombhalo? A ukwenqaba ukubiza noma ukuhlangabezana ubuso nobuso kungase kubonise ngaphezu namahloni kakhulu. Kungase kusho ukuthi asifuni ukuba ngikunike ukungabaza amanga abo. Transparency kuyisihluthulelo sokuba nobuhlobo obuhle. Uma bengakwazi obala ukuxhumana nawe, thatha ukuthi njengoba uphawu abanandaba kuwe ngaso sonke.
Ekugcineni, uma ubulokhu ukukhohliswa i scammer online futhi uke ngokuqola niphume iyiphi imali, kubike federal kahulumeni Internet Crime Center Isikhalazo. Kungase kube kancane amahloni ukuvuma ukuthi uke bakhohliswa, kodwa nokubika kuzosiza ukuvimbela abanye abantu imikhonyovu.